Fitaovana marketing maimaimpoana sy karama | Martech Zone
Ny tsirairay amin'ireto pejy sy lahatsoratra ireto dia manome fitaovana marketing maimaimpoana ho anao hampiasanao Martech Zone
Plezi One: Fitaovana maimaim-poana hamoronana fitarihana miaraka amin'ny tranokalanao B2B
Talata, Janoary 4, 2022 Talata, Janoary 4, 2022 Paul-Louis Valat
Taorian'ny volana maromaro nanaovana azy, Plezi, mpamatsy rindrambaiko automation marketing SaaS, dia mamoaka ny vokatra vaovao ao amin'ny beta ho an'ny daholobe, Plezi One. Ity fitaovana maimaim-poana sy intuitive ity dia manampy ireo orinasa B2B madinika sy salantsalany hanova ny tranokalan'ny orinasa ho lasa tranokala mpitarika. Fantaro ny fomba fiasany eto ambany. Amin'izao fotoana izao, 69% amin'ireo orinasa manana tranokala dia miezaka mampivelatra ny fahitana azy amin'ny alàlan'ny fantsona isan-karazany toy ny dokam-barotra na tambajotra sosialy. Na izany aza, ny 60% amin'izy ireo
Fahazavana: Sarintany hafanana maimaim-poana sy firaketana an-tsoratra ho an'ny fanatsarana ny tranokala
Alakamisy, Desambra 30, 2021 Alakamisy, Desambra 30, 2021 Douglas Karr
Rehefa namolavola sy namolavola lohahevitra Shopify mahazatra ho an'ny fivarotana akanjo an-tserasera izahay, dia te-hiantoka fa nanamboatra tranokala e-varotra kanto sy tsotra izay tsy mampisafotofoto na manohintohina ny mpanjifany izahay. Ohatra iray amin'ny fitsapana ny famolavolanay ny sakana fampahalalana bebe kokoa izay misy antsipiriany fanampiny momba ny vokatra. Raha namoaka ilay fizarana ao amin'ny faritra mahazatra izahay, dia hampidina be ny vidiny ary ampidirina amin'ny bokotra sarety. Na izany aza, raha
PowerChord: Fitantanana mpitarika eo an-toerana afovoany sy fizarana ho an'ny marika zaraina amin'ny mpivarotra
Alatsinainy Desambra 27, 2021 Alatsinainy Desambra 27, 2021 Stephanie Shreve
Arakaraka ny mahazo marika lehibe kokoa, ny ampahany mihetsika kokoa no miseho. Ny marika amidy amin'ny tambajotran'ny mpivarotra eo an-toerana dia manana tanjona ara-barotra, laharam-pahamehana ary traikefa an-tserasera sarotra kokoa hodinihina - manomboka amin'ny fomba fijery marika ka hatrany amin'ny sehatra eo an-toerana. Marika te ho mora hita sy hovidina. Ny mpivarotra dia maniry fitarihana vaovao, fifamoivoizana an-tongotra bebe kokoa, ary fitomboan'ny varotra. Ny mpanjifa dia mila fanangonam-baovao tsy misy korontana sy traikefa amin'ny fividianana - ary tadiaviny haingana izany.
Insights Audiense: Lozisialy faharanitan-tsaina sy famakafakana momba ny fizarana mpijery
Alakamisy, Desambra 23, 2021 Alakamisy, Desambra 23, 2021 Douglas Karr
Paikady sy fanamby lehibe rehefa mamolavola sy mivarotra marika dia ny fahatakarana hoe iza ny tsenanao. Ireo mpivarotra lehibe dia misoroka ny fakam-panahy maminavina satria matetika isika no mitanila amin'ny fomba fiasantsika. Ny tantara anecdotal avy amin'ireo mpanapa-kevitra anatiny izay manana fifandraisana amin'ny tsenany dia matetika tsy mampiseho ny fomba fijery ankapobeny ny mpihaino antsika dia noho ny antony vitsivitsy: Tsy voatery ho salan'isa na mpanjifa tsara indrindra ny ho avy na mpanjifa. Na dia mety manana orinasa iray aza